Jenn Lisak inteena gaarka ah ayaa loo soo bandhigay taladeeda markii la horumarinayo waxyaabaha. Maxay ku qaadataa, sida saxda ah, si ay u ahaato mid faafa? Borofisar ku takhasusay suuq-geynta Jonah Berger ayaa ka qoray buugiisa, Faafa: Waa maxay sababta ay wax uqabsadaan. Sida uu qabo Professor Berger, talaabada ugu horeysa waa qiiro. Haddii nuxurkaagu ku guuldareysto inuu ku xirnaado dhagaystayaasha shucuur ahaan, ma jiraan wax fursad ah oo ku jira inuu faafo. WhoIsHostingThis.com ayaa soo uruurisay xogtan ku saabsan barashada Professor Berger!